हालसम्म कति जनाको पीसीआर परीक्षण भयो, सरकारलाई नै पत्तो छैन | Ratopati
हालसम्म कति जनाको पीसीआर परीक्षण भयो, सरकारलाई नै पत्तो छैन
personमाया श्रेष्ठ exploreकाठमाडौं access_timeभदौ २२, २०७७ chat_bubble_outline0
भक्तपुरस्थित बालकोटका विनय खड्का (नाम परिवर्तन) ले ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने भएपछि पहिलो पटक श्रावण २४ मा टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा कोरोना परीक्षण गरे । कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि होमआइशोलेनमा बसेका उनले ११ दिनपछि घर नजिकै पुगेको घुम्ती टोलीलाई पुनः स्वाब दिए । खड्काको दोस्रो पटक पनि रिपोर्ट पोजेटिभ आयो ।
दोस्रो पटक रिपोर्ट पोजेटिभ आउँदा खड्कामा कुनै प्रकारको शारीरिक समस्या थिएन । सुरुवाती दिनमा ज्वरो, टाउको दुख्नेजस्ता समस्या भएका उनमा दोस्रो रिपोर्ट आउँदासम्म शारीरिक समस्या निको भइसकेको थियो । त्यसैले दोस्रो स्वाब परीक्षणको रिपोर्टको विश्वास नलागेर उनी निजी अस्पतालमा परीक्षण गराउन गए ।
तेस्रो पटक परीक्षण गराउँदा पनि कोरोना संक्रमण भएकै पुष्टि भयो । तेस्रो परीक्षणको १० दिनपछि उनले चौथो परीक्षण गराए । चौथो परीक्षणमा भने उनको रिपोर्ट ‘नेगेटिभ’ आयो ।
खड्काले जस्तै विशाल शर्मा (नाम परिर्वतन)ले पनि पटक पटक कोरोना परीक्षण गराएका छन् । पेशाले पत्रकार उनी विभिन्न स्थानमा पुगेर रिपोर्टिङ गरिरहनु पर्ने भएकाले पहिलो पटक पत्रकार महासंघको कार्यालयमा कोरोना संक्रमणको परीक्षण लागि उनले स्वाब दिएका थिए ।
दोस्रो पटक उनले महाबौद्धमा स्वाब दिएका थिए भने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका कारण तेस्रो पटक स्वाब परीक्षण गराउनु प¥यो । तीनै पटकका परीक्षणमा उनको रिपोर्ट नेगेटिभ आयो ।
संक्रमणका केही लक्षण देखिए पनि चौथो पटक उनले परीक्षण गराए । त्यतिबेला उनलाई रुघाखोकी, हल्का टाउको दुख्ने समस्या थियो । तर उक्त परीक्षणमा पनि उनको रिपोर्ट ‘नेगेटिभ’ नै आयो ।
यसरी कोरोना संक्रमितको सम्पर्कमा आएका र नआएका धेरै व्यक्तिले पहुँच र क्षमताको आधारमा पटकपटक स्वाब परीक्षण गराएका छन् । व्यक्तिगत तवरमा कोरोना लागे÷नलागेको थाहा पाउने अधिकार भए पनि एउटै व्यक्तिले पाँचदेखि सात पटकसम्ममा स्वाब परीक्षण गरेको पाइन्छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको आँकडामा आइतबारसम्म देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामार्फत ७ लाख ६८ हजार ३ सय ४५ पीसीआर परीक्षण गरेको उल्लेख छ । यो तथ्याङ्कले सर्वसाधारणमा ७ लाख ६८ हजार ३ सय ४५ जनाको पीसीआर परीक्षण भएको हो कि भन्ने खालको भ्रम सिर्जना गरे पनि पीसीआर परीक्षण गराउने व्यक्तिको संख्या त्यो होइन । यो त हालसम्म भएको पीसीआर परीक्षणको संख्या हो, जो एकै व्यक्तिले चार÷पाँच पटकसम्म परीक्षण गराएको अवस्थामा हरेक पटकको परीक्षण गणना गरिएको हुन्छ ।
त्यसो भए हालसम्म देशभर कति जनाको पीसीआर परीक्षण भयो त भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा सर्वसाधारणमा उब्जिन सक्छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग भने यसको जवाफ छैन । अर्थात्, देशभर कति जनाले कोरोना परीक्षण गरे भन्ने तथ्याङ्क सरकारसँग छैन ।
आइतबारसम्म नेपालमा कोरोना निको भएर घर फर्किनेको संख्या २८ हजार ९ सय ४१ छ । ती सबैलाई कोरोना संक्रमण परीक्षण पत्ता लगाउने क्रममा पहिलो पटक, संक्रमण निको भए÷नभएको पत्ता लगाउन दोस्रो÷तेस्रो पटक पीसीआर परीक्षण गरिन्छ ।
एक जना मानिसले जति पटक पीसीआर परीक्षण गरे पनि पीसीआर परीक्षण संख्या जोडिदै जान्छ । यसरी नै हालसम्म ७ लाख ६८ हजार ३ सय ४५ पीसीआर परीक्षण भएको हो ।
हालसम्म नेपालमा कोरोनाभाइरस संक्रमितको संख्या ४६ हजार २ सय ५७ पुगेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीकाअनुसार नेपालभर कति जनाले पीसीआर परीक्षण गरे भन्ने तथ्याङ्क छैन । ‘केही प्रयोगशालाबाट हालसम्म कति जनाले परीक्षण गरे भन्ने तथ्यांक आएको छ, केही प्रयोगशालाबाट कति वटा पीसीआर परीक्षण गरियो भन्ने तथ्यांक आएको छ, कहिले वटामा र कहिले जनामा गनेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म कति जनाले कोरोना परीक्षण गरे भनेर ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन ।’
आगामी दिनमा कति जनाको पीसीआर परीक्षण भयो र एक जनाले कति पटक परीक्षण ग¥यो भन्ने कुरा पत्ता लगाएर जानकारी दिन सकिने उनी बताउँछन् ।
यता राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुका डाक्टर राजेश गुप्ताकाअनुसार देशभरका प्रयोगशालाहरूले कति पीसीआर परीक्षण गरियो भनेर जानकारी दिए पनि हालसम्म कति जनाले पीसीआर गरे वा कति पटक गरे भन्ने जानकारी दिँदैनन् । एउटा मानिसले पटकपटक परीक्षण गरे पनि पीसीआरको संख्यामा जोडिदै जाने उनी बताउँछन् ।
नेपालमा हालसम्म ७ लाख ६८ हजार ३ सय ४५ पीसीआर परीक्षण भएको अवस्थामा पाँच लाखको जनाजतिको परीक्षण भएको हुन सक्ने अनुमान लगाउँछन् जनस्वास्थ्यविद् तथा इपिडिमियोलोजी महाशाखाका पूर्व प्रमुख डा. बाबुराम मरासिनी ।
गोपनीयताको हक हनन् भयो
नेपालमा कोरोना महामारीको नाममा गोपनीयताको हक हनन् भएको सरोकारवाला बताउँछन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग र मिडियाले गोपनीयताको हकलाई सम्मान नगरेको डा. मरासिनी बताउँछन् ।
कोरोना संक्रमित र संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको परिचय खुलाएर पटकपटक गल्ती दो¥याइरहेको उनको भनाइ छ । ‘संक्रमितको तथ्याङ्क दिँदा सिधै ठाउँ, वार्ड, उमेर भनिन्छ,’ उनले भने, ‘मिडिया र अस्पतालले नाम, उमेर र टोलसमेत प्रकाश पारिदिने काम गरे ।’
यसरी गोपनीयता भङ्ग गरेको खण्डमा चिकित्सकहरूको लाइसेन्ससमेत खारेज हुन सक्ने नियम रहेको उनको भनाइ छ । सूचना आयोगले संक्रमितको नाम छाप्न भने पनि विदेशमा यसरी संक्रमित, मृतकको नाम, ठेगाना तथा परिचय खुल्ने गरी जानकारी सार्वजनिक गर्न नपाइने उनले सुनाए । संक्रमितको गोपनीयता राखेर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्ने उनले बताए ।
कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएमा मृतकलाई विगतमा मधुमेह, मिर्गौला, मुटु रोग वा अन्य समस्या थियो भनिदिँदा अन्य दीर्घरोगीको मनोविज्ञानमा ठूलो असर पर्ने उनी बताउँछन् । दीर्घरोगी कोरोना संक्रमणले सिधै मर्छन् झैँ गरेर प्रचारप्रसार हुन थालेको भन्दै उनले यस्तो परिपाटी बन्द गर्नुपर्ने बताए ।
दीर्घरोगीलाई संक्रमित अन्य व्यक्तिको तुलनामा समस्या हुने भए पनि जनता माझ सूचना पु¥याउने शैली सही नभएको उनले बताए । ‘दीर्घरोगीले पनि कोरोना संक्रमणलाई जितेका छन्,’ उनले भने, ‘दीर्घरोगीमा कसरी कोरोनाभाइरस सर्न नदिने, कसरी दीर्घरोगी तथा वृद्धवृद्धाको आत्मबल बढाउने भन्ने बारेमा समुदायमा सूचना पु¥याउनुपर्छ ।’
संक्रमितको गोपनीयताको हकलाई ख्याल नगरेका कारण केही मानिसले ६÷७ पटकसम्म पनि पहुँचको आधारमा पीसीआर परीक्षण गरेका छन् भने केहीले गलत नाम, ठेगाना र सम्पर्क नम्बर दिएर परीक्षण गराउने र संक्रमित भएपछि सम्पर्कमा नआएको उनी बताउँछन् ।
गोपनीयताको हक कार्यान्वयन नहुँदा कोरोना संक्रमित निको भएर घर फर्किदा समेत भेदभाव खेप्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।